Naniry Ny Hampiray Ireo Firenena Roa i Sabika Sheikh, Ilay Mpianatra Pakistaney Maty Tamin’ny Fitifirana Tany Amin’ny Sekoly Amerikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2018 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, ਪੰਜਾਬੀ, Ελληνικά, Español, polski, English
Ny fahatongavan'ny vatana mangatsiakan'i Sabika Sheikh tao Pakistàna. Pikantsary avy tao amin'ny horonantsary Youtube an'ny Newsleak.
Nisy fandevenana natao ho an'i Sabika Sheikh tao Karachi tanànany, tamin'ny 23 May 2018, dimy andro taorian'ny nahafatesan'ilay Pakistaney 17 taona, mpianatra nifanakalo tany Amerika noho ny tifitra nataon'ny tovolahy iray nitàm-basy tao amin'ny sekoly iray tao amin'ny fanjakan'ny Texas.
Rehefa atambatra, olona 10 no maty niaraka tamin'i Sheikh ary 13 no naratra tao anatin'ilay herisetra. Mpianatra nifanakalo tao amin'ny sekoly ambaratonga ambony Santa Fe tao anatin'ny programa KL-YES eo ambanin'ny fanohanan'ny fanjakana amerikàna ary natao hiverina any amin'ny tanindrazany amin'ny 10 Jona 2018 rehefa avy namita an'ilay fandaharanasa.
Nanonja tao amin'ny fampahalalambaovao sosialy tao Pakistana ny vaovaon'ny fahafatesany, ary nilatsaka ireo hafatra fiaraha-miory. Talohan'ny nandefasana ny vatany mangatsiaka ho any Pakistana, nisy ihany koa fombafombam-pandevenana natao tao Texas tamin'ny 20 May 2018. Nibitsika i Michael Mathes, amerikàna mpanao pôlitika mpfandray amin'ny masoivohon'ny AFP:
Tena mahaontsa. Ny mpanatrika fandevenana tao Stafford, TX nivavaka teo amin'ny vatampatin'i Sabika Sheikh, ilay Pakistaney mpianatra nifanakalo ary maty tamin'ilay tifitra tambabe tao amin'ny sekoliny tao akaikin'ny Santa Fe.
Nandritra ny fombafombam-pandevenana azy tao Texas, niteny momba ny fiantraikany tao amin'ny fiainan-dry zareo ireo ray aman-dreny nampiantrano an'i Sheikh:
Miresaka momba ny fomba nahatongavan'i Sabika Sheikh tao amin'ny fiainany ny ray mpampiantrano azy. Miantso azy ho fanomezana sarobidy indrindra tonga tao amin'ny fiainany. Milaza izy fa fitiavana no fototry ny zavatra rehetra. Tiany ny hitondra ny fomba fitiavana nentiny avy tany Pakistana.
An-dranomaso no nitantaràn'ilay reny nampiantrano azy ny momba izay nampavitrika an'i Sheikh hianatra ao Etazonia:
Nanontany azy aho hoe ahoana sy nahoana no nahatonga azy tafiditra amin'ny faniriana ho lasa mpianatra vahiny mifanakalo. Ary niteny izy fa tia hianatra ny kolontsaina amerikana ary tiany i Amerikà mba hianatra ny momba ny kolontsain'i Pakistàna ary mba tiako isika raha hiray hina sy hiaraka. Niteny izy fa tsy hainy raha mahafantatra anay amin'ny fomba tokony ho izy ry zareo.
Momba ny fihetsehampony manokana amin'ny nahatonga azy ho voatsonga mba hianatra ao Etazonia, nandefa hafatra tamin'ny lahatsary i Sheikh:
Malahelo kely daholo ny olona manodidina ahy satria handao azy ireo aho, nefa io no zavatra tsara indrindra nitranga ho ahy. Nientanentana aho tamin'izany, ary mbola mientanentana hatramin'izao
Matetika, raketin'ny fampahalalambaovao amerikana i Pakistana, raha manao izany izy, amin'ny alàlan'ny voamaso tsy mahita afa-tsy korontana. Pakistaney izay, monina ao Etazonia, mpampiasa Twitter antsoina hoe Zareen Nayyar no iray tain'ireo maro nanamarika fa mateteika i Pakistàna no lokoina ho toy ny firenena tsy azo antoka, mampididoza:
Eritreritra fotsiny … Ity ankizivavy ity teraka sy notaizaina tao #Pakistana tsy maty teny amin'ny firenena niaviany, izay raha ny hevitry ny Andrefana, tsy manao na inona na inona mba hiadina amin'ny #fampihorohoroana. Kanefa tonga taty #Amerika izy ary maty tanaty #TifitraAntSekoly #mahagaga #tifitrasekolytexas #SabikaSheikh
Tifitra faobe, ao anatin'izay ny sekoly, no anisan'ny olana be indrindra ao Amerika. Araka ny tahirinkevitra avy ao amin'ny Rakitranà Herisetra amin'ny Basy (via Vox), 1.941 olona no maty ary 7.104 no naratra tanaty tifitra faobe 1.686 farafahakeliny nanomboka ny 2012, faritana ho toy ny toe-javatra nahitàna olona efatra na mihoatra (tsy ao anatiny ilay mpitifitra) izay voatifitra amin'ny fotoana mitovy ary toerana mitovy. Manana taha ambony be koa amin'ny famonoana amin'ny basy i Etazonia.
Ampahan'ilay olana, hoy ny manampahaizana, ny fahamorana fahazoana basy ao Etazonia: Manana ny taha ambony indrindra erantany amin'ny fananana basy ny firenena.
Niresaka tamin'ny mpampahalala vaovao, niangavy ny governemanta amerikana ny rain'i Sheikh sy ny dadatoany mba hanao ny sekoly ho azo antoka kokoa ho an'ny mpianany. Miaraka amin'ny fahafatesany, lasa olana manerantany ny olan'ny tifitra faobe ao Etazonia.